Samsung Galaxy Tab S5e na-efunahụ akara Wi-Fi ma ọ bụrụ na anyị ewere ya n'ụzọ ụfọdụ | Gam akporosis
Samsung Galaxy Tab S5e na-efunahụ akara Wi-Fi ma ọ bụrụ na anyị ewere ya n'ụzọ ụfọdụ
Mgbe Apple kwalitere iPhone 4, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị kwuru na ha ga-ata ahụhụ na njikọta nsogbu mgbe ha na-eji ọnụ ya, nsogbu dị ka Steve Jobs n'onwe ya si kwuo ọ bụ n'ihi anyị jiri ngwaọrụ. A maara nsogbu ahụ dị ka AntennaGate Ngwaọrụ ọhụrụ ahụ nke yiri ka ọ na-arịa otu nsogbu ahụ bụ Galaxy Tab S5e.
Samsung Galaxy Tab S5e, Ọ bụ mbadamba nkume kachasị ọhụrụ nke Samsung malitere na ahịa. Dị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ, ọ bụrụ na anyị ewere ngwaọrụ ahụ n'ụzọ ụfọdụ, akara Wi-Fi na-apụ n'anya na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na Samsung kwadoro nsogbu a, ọ nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu ngwaike nke doro anya enweghị ngwọta dị mfe.
N'okwu ndị a, naanị ihe ga-eme bụ ịgbanwe ọnọdụ Wi-Fi mgbawa n'onwe ya, ihe ndi injinia Samsung kwesiri iche mgbe ha mere ngwaọrụ ahụ. N'oge a, ọ dị ka ọ naghị emetụta ọtụtụ ndị ọrụ, mana ọ dị ka ntakịrị ntakịrị ọnụ ọgụgụ na-eto.
O doro anya ọ bụrụ na anyị were mbadamba Galaxy S5e na ala aka ekpe nke ihuenyo mgbe ọ na-anọchi ya, Njikọ Wi-Fi malitere igosi nrụrụ adịghị. Nsogbu ndị ọrụ na-eche bụ na ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu ngwaike, dịka m kwuru na mbido isiokwu a, n'ihi ọnọdụ nke mgbawa, ngwanrọ ngwanrọ agaghị edozi nsogbu ahụ.
Nanị ihe ngwọta maka nsogbu a bụ iji mbadamba nkume n'ụzọ ọzọ, dị ka Steve Jobs kwuru. Iji dozie nsogbu a, ụlọ ọrụ ndị Cupertino nyere ndị ọrụ niile nwere nsogbu mkpuchi, a bompa nke mere na mgbe ị na-eji ngwaọrụ ahụ, ọ bataghị na akụkụ ebe antenna dị.
Guysmụ okorobịa si Sammobile, enweela ike ịmeghachi otu ọnọdụ ahụ dịka ndị ọrụ si emetụta akara Wi-Fi na enyochala akara ngosi 50% belata, ọ bụghị 100% dị ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-ekwu. Ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na ị nwere mbadamba nkume a ma na-ata ahụhụ otu nsogbu ahụ, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ itinye mkpuchi na mbadamba nkume ahụ ma ị ga-ahụ otu nsogbu Wi-Fi si agbada.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung Galaxy Tab S5e na-efunahụ akara Wi-Fi ma ọ bụrụ na anyị ewere ya n'ụzọ ụfọdụ
Facebook na-ekpughe ihe dị ọhụrụ na Messenger na 2019